Ngazi kanjani ukuthi ushukela wami ujwayelekile noma unesifo sikashukela? > Imibuzo
Ungathola kanjani ukuthi nginoshukela ojwayelekile noma isifo sikashukela
Ushukela ojwayelekile: esiswini esingenalutho u-3.3-5.5 mmol / L, ngemuva kokudla 3.3-7.8 mmol / L.
Ngoshukela wakho, une-prediabetes - i-glycemia (NTNT) epholile.
Ushukela wokuphakanyiswa wokuvama uvame ukukhombisa ukumelana ne-insulin - amazinga aphezulu e-insulin - udinga ukuyeka ukuzila ukudla kanye nokukhuthaza i-insulin.
Izindlela zokuthi i-NGNT - i-glycemia (prediabetes) engasebenzi kahle - ushukela wokuzila uyanda isuka ku-5.6 iye ku-6.1 (ngaphezulu kuka-6.1 isifo sikashukela), noshukela ojwayelekile ngemuva kokudla - ufike ku-7.8 mmol / L.
Esimweni sakho, kufanele uqale ukulandela indlela yokudla - sikhipha ama-carbohydrate asheshayo, sidle ama-carbohydrate asezingeni ezincane, sidle inani elanele lamaprotheni anamafutha aphansi, kancane kancane sidle izithelo engxenyeni yokuqala yosuku bese sincika imifino ephansi ye-carb.
Kuyadingeka futhi ukwandisa ukusebenza komzimba. Ngaphezu kokudla nokucindezelwa, kuyadingeka ukulawula isisindo somzimba futhi akunakuvimbela ukuqoqwa kwezicubu ezinamafutha ngokweqile.
Ngaphezu kwalokho, kuyadingeka ukulawula ushukela wegazi (ngaphambi kanye namahora ama-2 ngemuva kokudla). Udinga ukulawula ushukela isikhathi esingu-1 ngosuku ngezikhathi ezihlukile + isikhathi esingu-1 ngesonto - iphrofayili ye-glycemic. Ngaphezu kokulawulwa kweshukela, i-hemoglobin ye-glycated (inkomba yamashukela egazi ajwayelekile ezinyangeni ezi-3) kufanele ithathwe isikhathi esingu-1 ezinyangeni ezi-3.
Ungathola kanjani ukuthi kukhona isifo sikashukela ekhaya?
Isifo sikashukela - kwenzeka ngenxa yokusebenza kahle kwesistimu ye-endocrine. Ukwehluleka kwenzeka ngenxa yokuntuleka kwe-insulin, i-hormone ekhishwa ngamanyikwe.
Lesi sifo sivame kakhulu futhi siyingozi, ngoba izimpawu zayo aziveli ngokushesha. Ngakho-ke, lesi sifo sivame ukutholakala esilinganisweni sokuthuthuka, lapho izinkinga sezivele ziqale ukukhula.
Kepha wazi kanjani ukuthi kunoshukela ekhaya? Uma kungenzeki ukuthi uvakashele udokotela bese uyokwenza izivivinyo, kufanele ufunde izimpawu ezingenzeka zalesi sifo. Ngaphezu kwalokho, yize kunezinhlobo ezahlukahlukene zezifo, ziyafana kakhulu.
Yini isifo sikashukela futhi kungani sikhula?
Ukubona isifo sikashukela ekhaya, okokuqala kufanele uthole imininingwane ejwayelekile ngalesi sifo. Kunezinhlobo ezi-2 zesifo, ezihlanganiswa yimpawu ejwayelekile - ukukhuphuka kweglucose egazini.
Esimweni sokuqala, i-pathology ikhula ngokuntuleka kwe-insulin emacaleni we-10-15%. Ngale hlobo lwesifo, ukwelashwa kwe-insulin kuhlale kwenziwa.
Ngohlobo lwesibili sikashukela, i-hormone ikhiqizwa ngenani elidingakalayo, kodwa amangqamuzana awanaki kuwo. Kulokhu, ukwelashwa kwe-insulin kunqunywa kuphela uma ngabe kufinyelelekile kulesifo.
Kusekhona "isifo sikashukela esisekupheleni", kepha kunzima ukuthola ukuthi kunesifo sikashukela. Isifo sikashukela esingahle sibuye siqokonyiswe, lapho ubungozi bokuqhamuka ne-hyperglycemia engapheli bukhula kakhulu.
Uma kunezici zobungozi, ikakhulukazi ezinganeni, izimpawu ezinokwenzeka kufanele zibhekwe, futhi kungcono uhlolwe ngokuphelele udokotela. Amathuba okuthola lesi sifo anda ezimweni ezinjalo:
I-hyperglycemia ngesikhathi sokukhulelwa,
ukusetshenziswa kwesikhathi eside kwezidakamizwa ezithile,
ukusetshenziswa kabi kwezidakamizwa notshwala
i-pathology yama-pancreas kanye nokuhlukunyezwa ohlelweni lwe-endocrine,
ingcindezi nengcindezi yomzwelo,
indlela yokuphila engasebenzi.
Kepha wazi kanjani ukuthi unesifo sikashukela ngezimpawu zesifo? Eqinisweni, ekhaya, kungenzeka ukunquma ukuba khona kwesifo sanoma yiluphi uhlobo, kodwa kuphela uma kuhambisana nesithombe somtholampilo esimenyezelwe.
Ukwanda kokubonakaliswa nakho kuthinteka ngezinga lokukhiqizwa kwe-insulin, ukumelana kwamangqamuzana kuma-hormone, ukuba khona kwe-pathologies engapheli, kanye nobudala besiguli.
Kumuntu ophile kahle, ngemuva kokudla, ushukela wegazi ukhuphuka ngokuqinile, kepha ngemuva kwamahora amabili, izinga le-glycemia lifanana. Futhi kuma-diabetes, i-glucose okuhlushwa iyancipha noma ikhuphuke kancane, lapho kutholakala khona izimpawu eziningi zezimpawu. Lokhu kufaka ukoma (i-polydipsia), lapho umuntu engaphuza kuze kufike kumalitha ayi-9 amanzi ngosuku, kanye nokwanda kokuchama, okungavimbi ngisho nasebusuku.
Imvamisa isiguli sizwa imizwa yokuzwa indlala njalo, isikhumba sayo somile futhi sintekenteke. Ubuthakathaka bemisipha kanye nokuqhekeka, ukukhathala okungenasizathu, ukungakhathaleli nokunganakwa nakho kuyavela.
Ngaphezu kwalokho, ngesifo sikashukela i-mellitus, umbono ungafiphala futhi kuvame ukuba nokugaya ukudla, kuboniswe isicanucanu nokuhlanza. Ngisho nomuntu onesifo sikashukela unezimpawu ezifana nomkhuhlane, i-paresthesia, ukuqina kwemilenze nokulunywa kwesikhumba esithweni sangasese, esiswini, emilenzeni.
Ngaphezu kwalokho, ungasibona lesi sifo ngokubonakaliswa okufana:
ukukhula kwezinwele zobuso,
ukonakala kwesigaxa esibi ngokweqile, okuvela ngemuva ngemuva kokuchama okuvamisile,
ukubonakala kwama-xanthomas emzimbeni,
ukuqothuka kwezinwele emaphethelweni.
Ezinganeni, lesi sifo singabonakala njengokuntuleka kwenzuzo enkulu, izifo ezithathelwanayo nokuqhuma kwe-diaper. Lapho umchamo ungena e-diaper, ubuso bawo buba yindlala.
Isifo sikashukela enganeni eneminyaka engama-3-5 ubudala singahambisana nezimpawu ezinjengokungathandi isifiso sokudla, ukukhathala okukhulu, ukuthamba ngokweqile, izitezi zezinkinga kanye nedysbiosis. Ngaphezu kwalokho, uphawu oluphawu lwe-hyperglycemia engapheli ezinganeni iphunga le-acetone ephuma emlonyeni.
Ukuthola isifo sikashukela eshumini nambili kulula kakhulu ukwedlula ezinsaneni. Kulesi sikhathi, lesi sifo sibonisa ukwanda kokudla, ukuchama kaningi, ukuncipha kwesisindo, ukuqina kanye nokoma.
Kuhle ukwazi ukuthi uhlobo ngalunye lwesifo sikashukela lunezinto zalo ezihlukile nezimpawu. Ngakho-ke, ngohlobo lokuqala lwesifo, izibonakaliso eziningi zalesi sifo ziyavela, kepha ziyahlukahluka ngamandla esibonakaliso. Isici esibonakalayo sefomu elimele i-insulin ukugxuma okubukhali kushukela wegazi, okuvame ukubangela ukukhubazeka, okungaholela ekhefeni.
Futhi, ngesifo sohlobo 1 ezinyangeni ezi-3-4, umuntu angalahlekelwa kuze kufike ku-15 kg. Ngaphezu kwalokho, inqubo yokulahlekelwa isisindo ihambisana nokudla okwengeziwe, ubuthakathaka kanye nokukhubazeka. Ukuntuleka kokwelashwa kuzoholela ku-anorexia, bese kuthi kamuva iketoacidosis ikhule, inesimo sokuphefumula esinezimpawu.
Ngaphezu kwalokho, ngesifo sikashukela sohlobo 1, umuntu wehlisa ngokushesha isisindo, naphezu kokudla okuhle. Lolu hlobo lwalesi sifo lutholakala kuze kube seminyakeni engama-30, futhi lungahamba nomuntu kusukela azalwa.
Futhi lapho sebekhulile, abantu bavame ukuba nohlobo lwesibili sikashukela. Njengomthetho, kimi kwabonakaliswa ngomlomo owomile, ukoma nokuchama okwandayo. Ngaphezu kwalokho, ifomu lesifo elizimele le-insulin lihambisana nokulunywa kwezitho zangasese. Imvamisa, isifo esinjalo senzeka ngokumelene nesizinda sehypertension, ukukhuluphala kanye esimweni sokumelana kwamaseli ku-insulin.
Kodwa-ke, ekuqaleni lesi sifo asivezi ukuzibonakalisa, ngakho-ke umuntu uhambela udokotela kuphela uma kukhona inkinga ethile ebangela izimpawu ezingemnandi. Imiphumela ivela ngokuqhathanisa nesizinda sokuqothuka kwemithambo kanye nekhono elibuthaka lokuvuselela izicubu.
Imvamisa lokhu kuthinta izitho ezibonakalayo kanye nokusebenza kwemilenze. Ngakho-ke, iziguli eziningi ziqala ukuya kudokotela ohlinzayo, e-opthometrist, bese kuba kuphela udokotela ohlinzayo.
Uma ubona noma iziphi izimpawu ezikhombisa ukuthi unesifo sikashukela, kufanele uye esibhedlela uye kuzo zonke izivivinyo ezidingekayo. Impela, ukutholakala kwesifo kusenesikhathi kuzogwema ukuthuthukiswa kwezinkinga ezinkulu ngokuzayo.
Indlela elula futhi enembile kunazo zonke yokulinganisa ushukela wegazi lakho ekhaya ukusebenzisa imitha. Ikhithi iqukethe imichilo yokuhlola kanye nedivayisi ekhethekile yokubhoboza umunwe.
Ngaphambi kokwenza uhlaziyo lwasekhaya, kubalulekile ukugeza izandla zakho kahle futhi usule ingaphezulu lesikhumba ngotshwala. Lokhu kuyadingeka ukuthola imiphumela ethembeke kakhulu, ngoba ukungcola emilengeni kungathinta ukusebenza.
Amazinga okushukela asheshayo angasukela ku-70 kuye ku-130 mg / dl. Kepha ngemuva kokudla, izinkomba zikhuphukela ku-180 mg / dl.
Enye indlela eyenziwe ekhaya yokuxilonga isifo sikashukela ngokusebenzisa imichilo yokuhlola esetshenziselwa ukuhlola umchamo. Kodwa-ke, akhombisa ubukhona besifo kuphela uma ukugcwala ushukela kuphezulu kakhulu. Uma izinga lingaphansi kwe-180 mg / dl, khona-ke imiphumela yokuhlola inganikeza izimpendulo ezingamanga, ngakho-ke kubalulekile ukwenza isivivinyo esengeziwe sokuhlolwa kwelebhu.
Usebenzisa i-AC1 tata, kungenzeka futhi ukubona iziphazamiso ku-carbohydrate metabolism kanye nomsebenzi we-pancreatic ekhaya. Amasethi anjalo avumela wena ukuthi unqume izinga le-hemoglobin A1C, ikhombisa ukuqina okuphakathi koshukela izinyanga ezintathu. Okuqukethwe kwe-hemoglobin ejwayelekile kufinyelela ku-6%.
Ngakho-ke, kulabo abanezimpawu ezihlukile zesifo sikashukela i-mellitus, okwathi ngemuva kokwenza ukuhlolwa kwasekhaya nabo bazithola bethola i-hyperglycemic (ngenhla kwe-130 mg / dl), kufanele uthintane nodokotela ngokushesha.
Kwesinye isimo, kungaba nenkinga ye-insulin, evame ukuphela ngokufa.
Ukuvimbela ukuqala kwalesi sifo, kubalulekile ukuthi ushintshe ngokuphelele indlela yokuphila. Ngale njongo, kufanele usiqaphe njalo isimo sakho bese udla okulungile. Ngakho-ke, udinga ukudla okungenani izikhathi ezi-5 ngosuku ngezinxenye ezincane. Ngasikhathi sinye, kuyadingeka ukushiya amafutha, i-carbohydrate esheshayo, ukudla okumnandi neziphuzo ezinekhabhoni.
Ngaphezu kwalokho, ukusetshenziswa kabi kukagwayi notshwala kuyenqatshelwe. Izikhathi ezithile, udinga ukubheka ushukela wegazi, ugweme ukucindezela futhi ungakhohlwa ngokuzivocavoca okulinganiselayo.
Kepha uma unesifo sikashukela sohlobo 1, ke ngaphezu kokulandela yonke imithetho engenhla, ukwelashwa kwe-insulin kuyadingeka. Kulokhu, umthamo nohlobo lwe-insulin kufanele kukhethwe ngudokotela ohambelayo. Kepha ngesisindo somzimba esijwayelekile kanye nesimo sokuzwela esilinganiselayo, umthamo omaphakathi we-insulin ungama-0,5-1 PIERES nge-1 kg yesisindo.
Ukuze unxephezele isifo sikashukela, kufanele uhlale uvivinya umzimba. Inzuzo yokusebenza komzimba ukuthi ngesikhathi sokuzivocavoca kwezicubu zemisipha, kuvela i-glucose oxidation enkulu. Ngakho-ke, lapho ushukela ushiswa emisipha, ukuqina kwawo egazini kuyancipha.
Ngohlobo lwesibili sikashukela, ukwelashwa kwe-insulin kwenziwa kuphela ezimweni eziphambili. Kepha ngalolu hlobo lwesifo, ukwelashwa kuyengezwa ekusebenzeni ngokomzimba nasekwelashweni kokudla, okubandakanya ukuthatha izidakamizwa ezinciphisa ushukela. Ukuvimbela izinkinga ezingabakhona ngeke kube okuphezulu, kepha kulokhu, ukwelashwa kukhethwa ngakunye. Ividiyo ekulesi sihloko izokutshela ukuthi ungasinquma kanjani isifo sikashukela.
Okujwayelekile ushukela wegazi: itafula leziguli ezinempilo ezinesifo sikashukela
Izinga likashukela egazini linquma ikhwalithi yomzimba. Ngemuva kokudla ushukela kanye nama-carbohydrate, umzimba uwashintsha abe ushukela, okuyingxenye yomthombo wamandla oyinhloko nokhombisa indawo yonke. Amandla anjalo ayadingeka emzimbeni womuntu ukuqinisekisa ukugcwaliseka okujwayelekile kwemisebenzi ehlukahlukene ukusuka emsebenzini wama-neurons kuya ezinqubweni ezenzeka ezingeni lamaselula. Ukuthoba, futhi ngisho nangaphezulu, ukwanda koshukela wegazi kuvusa ukubonakala kwezimpawu ezingemnandi. Ushukela ophakeme wegazi uphakamisa ukuthuthukiswa kwesifo sikashukela.
Ushukela wegazi ubalwa ku-mmol ilitha ngalinye, okungajwayelekile kumamiligram nge-desilitha ngayinye. Imvelo yoshukela wegazi kumuntu ophile kahle ingu-3.6-5.8 mmol / L. Esigulini ngasinye, isikhombisi sokugcina singumuntu ngamunye, ngaphezu kwalokho, inani liyahlukahluka ngokuya ngesilinganiso sokudla, ikakhulukazi okumnandi futhi okuphezulu kuma-carbohydrate alula, ngokwemvelo, ushintsho olunjalo alubhekwa njengendabuko futhi lungesikhathi esifushane.
Kubalulekile ukuthi izinga loshukela lingaphakathi kwebanga elijwayelekile. Ukwehla okunamandla noma ukwanda okunamandla kwe-glucose egazini akufanele kuvunyelwe, imiphumela ingaba mibi futhi ibe yingozi empilweni nasempilweni yesiguli - ukulahlekelwa ukwazi kuze kufike ku-coma, isifo sikashukela.
Izimiso zokulawulwa komzimba kwamazinga kashukela:
Ukuze ulondoloze ukugxila kweglucose ejwayelekile, ama-pancreas afihla ama-hormone amabili - i-insulin neglucagon noma i-polypeptide hormone.
I-insulin yi-hormone ekhiqizwa amaseli e-pancreatic, ayikhulula ekuphenduleni ushukela. I-insulin iyadingeka kumaseli amaningi omzimba womuntu, kufaka phakathi amangqamuzana emisipha, amaseli wesibindi, amaseli wamafutha. I-hormone iprotheni equkethe ama-amino acid angama-51 ahlukahlukene.
I-insulin yenza imisebenzi elandelayo:
itshela izicubu namaseli wesibindi isibonakaliso esifuna ukuqongelela (ukuqongelela) ushukela oguquliwe ngendlela ye-glycogen,
isiza amaseli wamafutha ukukhiqiza amanoni ngokuguqula ama-asidi anamafutha kanye ne-glycerin,
inika isibonakaliso ezinso nasezibindini ukumisa ukucasulwa kwe-glucose yazo ngenqubo ye-metabolic - gluconeogenesis,
ivuselela amaseli emisipha namaseli wesibindi ukufihla amaprotheni kuma-amino acid.
Inhloso eyinhloko ye-insulin ukusiza umzimba ekutholeni izakhamzimba ngemuva kokudla, ngenxa yokuthi izinga likashukela egazini, okunamafutha nama-amino acid kwehla kanjani.
IGlucagon ngamaprotheni akhiqizwa amaseli we-alpha. IGlucagon inethonya ushukela wegazi ophikisana ne-insulin. Lapho i-glucose egazini incipha, i-hormone inikeza amaseli kumaseli emisipha namaseli wesibindi ukuze kusebenze i-glucose njenge-glycogen yi-glycogenolysis. I-Glucagon ivuselela izinso nesibindi ukukhipha ushukela wayo.
Ngenxa yalokhu, i-glucagon ye-hormone ithatha ushukela emalungeni amaningana bese iwagcina esezingeni elanele. Uma lokhu kungenzeki, izinga loshukela wegazi lehla ngaphansi kwamanani ajwayelekile.
Kwesinye isikhathi ukungasebenzi kahle komzimba ngaphansi kwethonya lezinto ezingalungile zangaphandle noma zangaphakathi, ngenxa yokuthi iziphazamiso zithinta inqubo inqubo ye-metabolic. Ngenxa yokwephulwa okunjalo, i-pancreas iyayeka ukukhiqiza i-insulin ngokwanele, amaseli omzimba asabela ngokungafanele kuyo, futhi ekugcineni izinga likashukela wegazi liyenyuka. Lokhu kuphazamiseka kwemetabolism kubizwa ngokuthi isifo sikashukela.
Izinga likashukela ezinganeni nakubantu abadala liyahlukahluka, kwabesifazane nakwabesilisa akuhlukile. Inani lokugcotshwa kweglucose egazini lithintwa ukuthi umuntu uvivinya yini esiswini esingenalutho noma ngemuva kokudla.
Isimo esivumelekile sikashukela wegazi kwabesifazane ngu-3.5-5.8 mmol / l (okufanayo necansi elinamandla), la magugu ajwayelekile ukuhlaziya okwenziwe ekuseni ngesisu esingenalutho. Izibalo ezikhonjisiwe zilungile ngokuthatha igazi kusuka emunweni. Ukuhlaziywa kusuka kumthambo kukhombisa amanani ajwayelekile kusuka ku-3.7 kuye ku-6.1 mmol / L. Ukwanda kwezinkomba kuya ku-6.9 - kusuka kumthambo kuya ku-6 - kusuka emunweni kukhombisa isimo esibizwa nge-prediabetes. Isifo sikashukela yisimo sokungabekezeleleki kwe-glucose engasebenzi kahle kanye ne-glycemia engasebenzi kahle. Ngamazinga kashukela egazini angaphezu kuka-6.1 - kusuka emunweni naku-7 - kusuka emthanjeni, isiguli sitholakala sinesifo sikashukela i-mellitus.
Kwezinye izimo, ukuhlolwa kwegazi kufanele kuthathwe ngokushesha, futhi kungenzeka ukuthi isiguli sesivele sikudlile ukudla. Kulokhu, izinkambiso zikashukela wegazi kubantu abadala zizohluka kusuka ku-4 kuye ku-7.8 mmol / L. Ukuhamba usuka kokujwayelekile uye ohlangothini oluncane noma olukhulu kudinga ukuhlaziywa okwengeziwe.
Ezinganeni, amazinga kashukela egazini ayahlukahluka ngokuya ngeminyaka yezingane.Ezinganeni ezisanda kuzalwa, amanani ajwayelekile aqala ku-2.8 kuya ku-4,4 mmol / L. Ezinganeni ezineminyaka eyi-1-5, izinkomba kusuka ku-3.3 kuya ku-5.0 mmol / ilitha zithathwa njengejwayelekile. Imvelo yoshukela wegazi ezinganeni ezineminyaka engaphezu kwemihlanu iyafana nezinkomba zabantu abadala. Izinkomba ezingaphezu kwe-6.1 mmol / ilitha zibonisa ukuba khona kwesifo sikashukela.
Ngokuqala kokukhulelwa, umzimba uthola izindlela ezintsha zokusebenza, ekuqaleni kunzima ukuzivumelanisa nezinguquko ezintsha, kuvame ukwehluleka ukwehluleka, ngenxa yalokho imiphumela yokuhlaziya okuningi nokuhlolwa kuphambuka kokujwayelekile. Amazinga kashukela wegazi ahlukile kumanani ajwayelekile kumuntu omdala. Amazinga kashukela wegazi kwabesifazane abalindele ukuvela kwengane asebangeni ukusuka ku-3.8 kuya ku-5.8 mmol / ilitha. Ngemuva kokuthola inani eliphakeme, lona wesifazane unikezwa izivivinyo ezingeziwe.
Kwesinye isikhathi ngesikhathi sokukhulelwa, kuvela isimo sikashukela wokukhulelwa. Le nqubo ye-pathological yenzeka engxenyeni yesibili yokukhulelwa, ngemuva kokubonakala kwengane idlula ngokuzimele. Kodwa-ke, uma kunezici ezithile zobungozi ngemuva kokuthola umntwana, isifo sikashukela sokukhulelwa singaphenduka ushukela. Ukuze uvikele ukukhula kwesifo esibi, kuyadingeka ukuthi ngaso sonke isikhathi uhlole igazi ushukela, ulandele izincomo zikadokotela.
Ngezansi kwetafula lokufingqa olunolwazi lokuhlushwa ushukela egazini, ukubaluleka kwalo empilweni yabantu.
Nakani! Imininingwane eyethulwayo ayiniki ukunemba okungu-100%, ngoba isiguli ngasinye singumuntu ngamunye.
Amanani kashukela wegazi - Ithebula:
Imvelo yoshukela wegazi nokuphambuka kuyo nencazelo emfushane:
Amanani eglucose ayingozi angalingani empilweni. Amanani anikezwa ku-mmol / ilitha, mg / dl, kanye nokuhlolwa kwe-HbA1c.
Lapho ushukela wegazi ukhuphuka kumuntu ophile kahle, uzizwa enezimpawu ezingemnandi, ngenxa yokuqalwa kwesifo sikashukela, izimpawu zomtholampilo ziya ziqina, kanti ezinye izifo zingavela ngemuva kwesifo. Uma ungaboni udokotela ezimpawu zokuqala zokuphazamiseka kwe-metabolic, ungakwazi ukweqa ukuqala kwalesi sifo, ngenxa yalokho kungaba nzima ukwelapha isifo sikashukela, ngoba ngalesi sifo ungaqhubeka unesimo esijwayelekile.
Kubalulekile! Isibonakaliso esiyinhloko sikashukela wegazi ophezulu umuzwa womile. Isiguli sihlala somile, izinso zakhe zisebenza ngokuzikhandla ukuze ihlunge ushukela owedlulele, kuyilapho zithatha umswakama ezithweni nezicubu zomzimba, ngakho-ke kukhona umuzwa wokoma.
Ezinye izimpawu zikashukela ophezulu:
ukukhuphuka kwesifiso sokuya endlini yangasese, ukukhuphula ukukhipha uketshezi, ngenxa yokusebenza kakhulu kwezinso,
i-mucosa yomlomo eyomile,
ukulunywa kwezitho zomzimba, ezikhulunyelwa kakhulu ezithweni ezisondelene,
ubuthakathaka obujwayelekile bomzimba, ukukhushulwa okuthe xaxa.
Izimpawu zikashukela wegazi eliphakeme azivunyelwa njalo. Kwesinye isikhathi lesi sifo singathuthuka ngokuphelele, inkambo enjalo ye-pathology eyingozi kakhulu iyingozi kakhulu kunenketho enesithombe esishiwo somtholampilo. Ukutholwa kwesifo sikashukela i-mellitus iba isimanga esiphelele kwiziguli, ngalesi sikhathi ukuphazamiseka okukhulu ekusebenzeni kwezitho zomzimba kungabonakala emzimbeni.
Isifo sikashukela i-mellitus kumele sigcinwe njalo sihlolwe njalo ukuthi kugxilwe i-glucose noma kusetshenziswa imitha kashukela wegazi ekhaya. Uma kungekho ukwelashwa okuqhubekayo, umbono uyawohloka ezigulini; ezimweni esezithuthukile, inqubo yokuphanjaniswa kwezitho zangasese ingavusa ubumpumputhe ngokuphelele. Ushukela omkhulu wegazi ungenye yezimbangela eziphambili zokuhlaselwa yisifo senhliziyo nemivimbo, ukuhluleka kwezinso, ukuqunjelwa imilenze. Ukuqapha njalo kokuhlushwa kwe-glucose yisilinganiso esiyinhloko ekwelapheni lesi sifo.
Uma kutholakala izimpawu, awukwazi ukusebenzisa indlela yokuzelapha, ukuzelapha ngaphandle kokuxilongwa okuyiyo, ulwazi lwezinto ezithile, ukuba khona kwezifo ezihambisanayo kungabhebhethekisa kakhulu isimo esivamile sesiguli. Ukwelashwa kwesifo sikashukela kwenziwa ngokuqinile ngaphansi kokuqondisa udokotela.
Manje uyazi ukuthi liyini izinga likashukela wegazi kumuntu omdala. Esigulini esiphilile, leli nani lihlukahluka lisuka ku-3.6 liye ku-5.5 mmol / ilitha, inkomba enenani elivela ku-6.1 kuya ku-6.9 mmol ilitha libhekwa njenge-prediabetes. Kodwa-ke, ushukela wegazi ophakeme akusho ukuthi isiguli sizoba nesifo sikashukela, kepha lesi yisikhathi sokudla imikhiqizo esezingeni eliphezulu futhi efanele, ukuze umlutha wezemidlalo.
Yini okufanele uyenze ukuze wehlise ushukela wegazi:
ukulawula isisindo esifanele, uma kunamaphawundi angeziwe, wehlise isisindo, kepha hhayi ngosizo lokudla okuqedayo, kepha ngosizo lomsebenzi womzimba kanye nokudla okunempilo - akukho mafutha nama-carbohydrate asheshayo,
ukulinganisela ekudleni, gcwalisa imenyu ngemifino entsha nezithelo, ngaphandle kwamazambane, ubhanana kanye namagilebhisi, ukudla okuphezulu emafayilini, qeda ukudla okunamafutha nokuthosiwe, okubhakiwe ne-confectionery, utshwala, ikofi
qaphela izindlela zokusebenza nokuphumula, amahora angu-8 ngosuku - ubude besikhathi sokulala, kunconyelwa ukulala futhi uvuke ngasikhathi sinye,
ukwenza ukuzivocavoca umzimba nsuku zonke, thola ezemidlalo oyithandayo, uma singekho isikhathi semidlalo egcwele, yabelana okungenani imizuzu engamashumi amathathu ngosuku ukuze uzivivinya ekuseni, kusiza kakhulu ukuhamba emoyeni omusha,
yeka imikhuba emibi.
Kubalulekile! Awukwazi ukubulawa yindlala, uhlale ekudleni okuqothulayo, ukudla okuphathelene nokungena emzimbeni. Ukudla okunjalo kuzodala ukuphazamiseka kwe-metabolic enkulu futhi kube yinto eyengeziwe engcupheni yokwakheka kwesifo esingaqondakali esinezinkinga eziningi.
Iziguli ezinoshukela wegazi ophakeme futhi, ikakhulukazi, iziguli ezinesifo sikashukela kudingeka zilinganise ushukela we-glucose nsuku zonke, ngokukhethekile esiswini esingenalutho nangemva kokudla. Kodwa-ke, lokhu akusho ukuthi iziguli kudingeka ziye esibhedlela nsuku zonke ukuze ziyohlaziywa. Ukuhlolwa kungenziwa ekhaya kusetshenziswa idivaysi ekhethekile - i-glucometer. I-glucometer iyithuluzi elincane ngalinye lokulinganisa amazinga kashukela egazi, imichilo yokuhlola inamathele kudivayisi.
Ukukala umucu wokuhlola, faka inani elincane legazi kusuka emunweni, bese ubeka umucu ngaphakathi kwento. Ngaphakathi kwemizuzwana engu-5-30, imitha izokhomba inkomba futhi ibonise umphumela wokuhlaziywa kusikrini.
Kungcono ukuthatha igazi kusuka emunweni, ngemuva kokwenza ukubhoboza nge-lancet ekhethekile. Ngesikhathi senqubo, indawo yokubhoboza izitho kufanele isulwe ngotshwala bezokwelapha ukuvikela ukutheleleka.
Imiphi imitha ongayikhetha? Kukhona inani elikhulu lamamodeli wamadivayisi anjalo, amamodeli ahlukile ngosayizi nesimo. Ukukhetha idivaysi efanelekile kakhulu yokulinganisa amazinga kashukela wegazi, qala uthintane nodokotela wakho bese ucacisa ngemihle imodeli ethile ngaphezu kwabanye.
Yize ukuhlolwa kwasekhaya kungakulungele ukunquma imishanguzo futhi kuzobe kungasebenzi uma kwenzeka ohlinzelwa ohlongozwayo, adlala indima enkulu ekubhekeni impilo yakho nsuku zonke. Kulokhu, isiguli sizokwazi ngokunembile ukuthi sizothatha nini izinyathelo ezifanele zokunciphisa ushukela wegazi, futhi uma, kunalokho, siphuza itiye elimnandi uma ushukela ehla kakhulu.
Ukuhlaziywa kokuhlushwa kwe-glucose kwasekuqaleni kuyadingeka kwiziguli ezinesifo sikashukela. Akubalulekanga kangako ukuthi kuhlaziywe abantu abasesimweni se-prediabetes, kanye nokwelashwa okufanele nokuvimbela ukuguqulwa kwe-prediabetes kushukela, kungenzeka ukugwema.
Abantu abanezihlobo zabo ezisondelene nezifo ezinesifo sikashukela kumele bahlolwe njalo ngonyaka. Futhi, minyaka yonke kunconywa ukuthatha izivivinyo zabantu abaphethwe ukukhuluphala. Ezinye iziguli ezineminyaka engaphezulu kwengama-40 kufanele ziyohlola igazi nge-glucose njalo eminyakeni emi-3.
Kukangaki ukunikeza ukuhlaziywa kweziguli ezikhulelwe? Imvamisa yokuhlolwa kokuhlungwa kwe-glucose egazini kwabesifazane abakhulelwe inqunywe ngudokotela ohambelayo. Okuhle kunakho konke, uma owesifazane elinde ukuzalwa kwengane ezohlolwa ushukela kanye ngenyanga, naphakathi kokunye ukuhlolwa kwegazi ngokuhlolwa okwengeziwe kwe-glucose.
Ezinye izihloko ezihlobene:
Udokotela wesigaba sokuqala, isikhungo esizimele sezokwelapha "Dobromed", eMoscow. Umeluleki wesayensi wephephabhuku le-elekhtronikhi "Diabetes-Sugar.rf".
Isifo sikashukela i-mellitus sivame ukubizwa ngokuthi "umbulali othule". Cishe i-25% yeziguli ayazi ngokwakhiwa kwe-pathology ebucayi. Kwephula kancane kancane ukusebenza kwezitho zomzimba, futhi uma ungazinaki izigaba zokuqala zesifo sikashukela, ukwehluleka kwezinso, ukushaya kwenhliziyo, izinkinga zomlenze, ukungaboni kahle, ngisho nokuba nesifo sikashukela kungenzeka.
Kunezici eziningana zobungozi besifo sikashukela:
umphumela emva kokutheleleka ngegciwane,
Isici esiyindlalifa ebusweni besifo se-endocrine ezihlotsheni eziseduze,
ukukhuluphala, ikakhulukazi esigabeni sokugcina,
ukuphazamiseka kwe-hormonal, ngokwesibonelo, kwindlala yegilo, ukuhlukunyezwa kwamathambo endlala,
isifo sokuqina kwemithambo yegazi emithanjeni yegazi, nayo emincane futhi igqekisa emaphashini,
izimo ezicindezelayo ezingapheli
umfutho wegazi ophakeme ngaphandle kokwelashwa,
ukuthatha izinhlobo ezithile zezidakamizwa,
ukungasebenzi kahle kwemetabolism,
ukukhuphuka ushukela ngesikhathi sokukhulelwa noma ukuzalwa kwengane enesisindo esingaphezu kuka-4-5 kg,
umlutha ongapheli wezidakamizwa noma wotshwala,
izinkinga zokudla, lapho amafutha esekhona ngevolumu enkulu, kunzima ukugaya ama-carbohydrate esikhundleni semifino equkethe imicu nemicu yemvelo.
Kuyadingeka ukuphendula kulezi zinto, futhi ukuze lesi sifo singabonakali, kufanelekile ukubuyekeza isimo sengqondo empilweni, indlela yokuphila, kanye nokudla, ushiya zonke izinhlobo zemikhuba emibi futhi unake ezemidlalo.
Kunezinhlobo eziningi zesifo sikashukela:
Isifo sikashukela sokutholwa kwesisu Kuvela ngesikhathi sokukhulelwa lapho umzimba wowesifazane okhulelwe ungakhiqizi i-insulin eyanele ngenxa yokushintsha kwamahhala noshukela kuphakama. Imvamisa ivela ku-2nd trimester bese idlula ngemuva kokubeletha.
Uhlobo lwe-Neonatal - isenzeko esingajwayelekile ngenxa yezinguquko zofuzo ezithinta inqubo yokukhiqizwa kwe-insulin.
1 uhlobo lwesifo Kuvela uma ama-pancreas eyeka ukukhiqiza i-insulin edingekayo, egcina ukunakekelwa kwe-glucose kulawulwa. Lesi yisifo se-autoimmune esinezimpawu zayo futhi siphathwa kuphela ngokufaka i-insulin egazini.
Thayipha isifo sikashukela sesi-2 Kuba khona uma amaseli eyeka ukumunca i-insulin, noma ngabe akhiqizwa ngokwanele. Imane ayisebenzi emzabalazweni wokuqina kweshukela. Imvamisa, ukuphazamiseka okunjalo kwenzeka ngokuphulwa kancane kancane kwezinqubo ze-metabolic, ukukhuluphala ngokweqile futhi ngenxa yeminye i-pathologies.
Isigaba sokuqala sesi sifo sivame ukuvela ngaphandle kwezimpawu. Ukuxilongwa kungenzeka, ngokwesibonelo, ngemuva kokuvakashela i-phlebologist noma udokotela wamehlo. Kepha kukhona uhlu lwezimpawu ezibonakala zizo zonke izinhlobo ze-pathology. Ukucaciswa kokubonakaliswa kwabo kuncike ezingeni lokunciphiswa kokukhiqizwa kwe-insulin, impilo iyonke, kanye nobude besifo. Ngokunyuka kweshukela, okungancelwanga ukukhiqizwa kwe-insulin, kuvame ukubonwa:
i-epidermis emile engenangqondo,
amanxeba amade okupholisa
iphunga le-acetone elisuka emgodini womlomo,
Izinkinga ze-gynecological kanye nokuphazamiseka kwezocansi,
ukugoba emisipha yamathole, ukuqina
ukulahleka kwe-visual acuity
ukugabha nokucanuzelelwa kwenhliziyo
ukutheleleka esikhunjeni, izifo fungal, kanye furunculosis,
amafutha amaningi (ngohlobo 2) noma ukuncipha okukhulu kwesisindo ngo (uhlobo 1),
ukuluma nokuxhuma kolwelwesi lwe-mucous lomlomo nezitho zangasese,
ukulahleka kwezinwele kuwo wonke amalunga,
ukukhula okuphuzi emzimbeni.
Lezi yizimpawu ezijwayelekile lapho kuvela isifo sikashukela, kepha zingahlukaniswa ngohlobo lwesifo ukuthola kahle, ukubona ubukhulu besifo sikashukela, futhi sikuyeke ngendlela efanele ukuvikela imiphumela eyingozi. Ezinganeni, isifo se-endocrine sinezimpawu ezifanayo futhi sidinga ukunaka ngokushesha kudokotela wezingane.
Ukubonisana nodokotela uma kwenzeka usola - funda lapha.
Lolu hlobo lwesifo sikashukela lubonakala ngezimpawu ezibucayi kanye nokuvela obala kwalesi sifo. Ngalesi sifo, ukuguquguquka okubukhali kushukela kwenzeka, kusuka kokuphansi ngokweqile kuya phezulu, kuyingozi kubantu. Ngoshukela wohlobo loku-1, ukuncipha okusheshayo kwenzeka, ezinyangeni zokuqala zingaba ngu-15 kg.
Ngokuncipha okubukhali kwesisindo, ubuthakathaka, ukozela, kanye nokwehliswa okukhulu kwamandla okusebenza kuyabonakala futhi. Ukudla ngasikhathi sinye kuhlala ezingeni eliphezulu. Ngaphezu kwalokho, i-anorexia ingahle ibe khona, ehambisana nephunga elivela emgodleni womlomo, ukuhlanza, isicanucanu esivamile, izinhlungu ezibukhali noma eziqaqambayo zesisu.
Isifo sikashukela sohlobo loku-1 senzeka ikakhulukazi ezigulini ezisezincane, ezinganeni nasentsheni emva kokuxineka kakhulu noma i-SARS eyinkimbinkimbi, isuke ishiwo ngemuva kweminyaka engama-40. Uhlobo lwesibili luthinteka kakhulu ngabantu abaneminyaka ephakathi nabadala, bathambekele ekugcwalekeni futhi bazibandakanye nemisebenzi elimaza umzimba.
Thola ezinye izinkomba zesifo sikashukela sohlobo 1 lapha.
I-pathology ye-endocrine enjalo ibonakaliswa ukuchama kaningi kanye nomuzwa wokoma. Isizathu sokuya kudokotela kufanele futhi sibe ukulunywa endaweni esondelene nasesikhumbeni semilenze. Kepha ukubonakaliswa okunjalo kungahle kungabonakali, khona-ke lesi sifo siqhubeka ngaphandle kwezimpawu kuze kube iminyaka eminingana.
Kungemva kokuxakeka kuphela lapho abantu baya kodokotela. Udokotela wamehlo angaxilonga i-retinopathy, ikhathalogu, udokotela ohlinzayo angaxilonga unyawo lwesifo sikashukela, udokotela wamazinyo angakwazi ukubona izilonda zesifo esingelapheki. Ukuhlaselwa yisifo senhliziyo onolwazi noma isifo sohlangothi kungakhombisa nokuthi i-hyperglycemia. Lapho kuvela izimpawu zokuqala, lapho kukhona into ekhulisa ifa, kubalulekile ukunikela ngaso leso sikhathi egazini le-glucose futhi uvakashele i-endocrinologist.
Funda kabanzi mayelana nezimpawu zesifo sikashukela sohlobo 2 - funda lapha.
Iziphi ezinye zezimpawu ezibalulekile ezibonisa ukuthi unesifo sikashukela? Funda ukuthi ungasibona kanjani isifo sikashukela ngaphambi kokuthi kudale umonakalo omkhulu emzimbeni, kusukela kuvidiyo.
Izifundo eziningi zisiza ukuqaphela lesi sifo futhi zinqume uhlobo lwaso, olubalulekile ekwelashweni okwengeziwe nasekuthuthukiseni ikhwalithi yempilo. Uma usola ukuthi ushukela owengeziwe unikezwa:
Udokotela ngamunye onesifo sikashukela kufanele abhaliswe futhi avakashele i-endocrinologist, athathe izivivinyo ngezikhathi ezithile, aqaphele nezinga likashukela ekhaya, inhlala-kahle yonkana, axhumane nochwepheshe abahlobene uma kwenzeka izifo ezifanayo. Ukudla okukhethekile kuyadingeka, kanye nendlela yokuphila enempilo, ukugcina ushukela ulawulwa.
Into enhle kakhulu ukuqala ukwelapha noma yiluphi uhlobo lwesifo sikashukela ekuqaleni ukuze ususe ubungozi bezinkinga. Lapho kuvela izimpawu zokuqala zalesi sifo, ungenza ukuhlolwa kwamazinga kashukela ekhaya. Lapho kukhona i-hyperglycemia, kukhonjiswa ukwenziwa nsuku zonke.
Kusetshenziswa imitha. Isivivinyo sasekhaya esinembile nesilula. Idivayisi iza ngokuphelele ngemizila eminingana yokuvivinya nedivayisi yokubhoboza iminwe. Kubalulekile ukuthi kuqala uhlambe indawo lapho kuzothathwa khona igazi ukuze uyohlolwa. Ukushesha kwe-glucose kujwayelekile ngo-70-130 mg / dl, ngemuva kokudla ngaphansi kwama-180 mg / dl.
Imichilo Yokuhlola Umchamo. Ukuba khona kwe-glucose kumchamo kunqunywa. Ukuhlolwa okwakhayo kudinga ukuhlolwa kwegazi.
Ikhithi ye-A1C. Ikuvumela ukuthi unqume ushukela ekhaya, kanye ne-hemoglobin. Isimo soshukela asikho ngaphezu kwe-6% ngokobufakazi bohlelo lokusebenza, esiveza umphumela ngemuva kwemizuzu emi-5.
Izindlela ezinjalo zasekhaya zingasetshenziswa ngemuva kwezimpawu zokuqala zesifo. Kepha ngisho abakwazi ukuqinisekisa isithombe esiphelele se-endocrine pathology. Udokotela nokuhlolwa kwelebhu kuphela okuzobonisa ukuthi yikuphi ukwelashwa nokuthi yikuphi imithamo edingekayo.
Isifo sikashukela yisifo esiyinkimbinkimbi esiholela ngaphandle kokwelashwa okungathi sína nokuvinjwa kwezinkinga ze-insulin emiphumeleni emibi, kuze kube sekufeni. Kuyadingeka ukuyikhomba nokulawula ngosizo lwezokwelapha ngesikhathi, landela zonke izincomo zokwelashwa ukuze ulondoloze impilo ephezulu.
Ungasinquma kanjani isifo sikashukela ngaphandle kokuhlolwa ekhaya
Isifo sikashukela yisifo esiyingozi esibulala njalo ngonyaka impilo yabantu abayizigidi ezimbili emhlabeni. Futhi iningi lalezi zimpilo belingasindiswa ukube lesi sifo sasiqashelwe ngesikhathi. Ingozi yokuthola isifo sikashukela iyasikhathaza sonke. Ngakho-ke, kubalulekile ukunquma ngesikhathi ukuthi umuntu unesifo sikashukela noma cha.
Ungasibona kanjani isifo sikashukela kusenesikhathi, ungathola kanjani ukuthi unesifo? Vele, kuthembeke kakhulu ukuya kudokotela futhi uphumelele izivivinyo ezifanele. Le nqubo iveza ngokungenaphutha ukuba khona kwesifo kumuntu noma kuxosha konke izinsolo.
Kodwa-ke, ukwenza lokhu ngesikhathi esifanele akuyona into engenzeka ngaso sonke isikhathi. Kulesi sihloko sizohlola ukuthi kungenzeka yini ukuthi kutholakale ukuthi kukhona umuntu onesifo sikashukela ekhaya, yiziphi izimpawu nezinhlobo zokuhlola ezingasithola lesi sifo.
Isifo sikashukela yisifo esisehlelweni esihambisana nomsebenzi we-insulin ongasebenzi kahle kanye nokufakwa kweglue emzimbeni. Kunezinhlobo ezimbili eziphambili zokugula. Uhlobo lokuqala yisifo sikashukela esincike ku-insulin. Lolu hlobo lwesifo lubonakala ngokuntuleka kwe-insulin - ngenxa yokuthi i-insulin ayakhiqizwa ngamanyikwe, ngokuqondile, ngamaseli e-beta pancreas. Odokotela banquma uhlobo lwesibili sikashukela uma kukhona ukwephulwa kokusebenzisana kwe-insulin namaseli.
Isifo sikashukela siyingozi ngokwakhiwa kwezinkinga ezinjengokuthi:
isifo senhliziyo nesifo senhliziyo,
ukudideka ngenxa ye-hypoglycemic coma.
Uhlobo lokuqala lwesifo sikashukela lubizwa nangokuthi izingane - ngenxa yokuthi bahlushwa kakhulu yintsha kanye nabantu abangaphansi kweminyaka engama-30. Uhlobo 2 sikashukela luba ikakhulukazi ngemuva kweminyaka engama-40.
Ungasibona isifo esikhule ngokugcwele yizimpawu ezinjengokuthi:
ukuchama kaningi, ikakhulukazi ebusuku,
ukwehla okukhulu kwesisindo
umlomo owomile nesikhumba esomile
ukonakala kwezinsini, isikhumba nezinwele,
ukululama kwenxeba okuhamba kancane
ukwakheka kwezilonda, amathumba nezilonda esikhunjeni,
Lapho uhlola ukuhlolwa, kutholakala ukwanda kokuxineka kwe-glucose egazini nomchamo, okwenza sikwazi ukuthola isifo sikashukela ngokungenanjongo. Ngemuva kokuba lesi sifo sitholakele futhi udokotela eqonda izici zako, kulapho kuphela lapho ukwelashwa kwalesi sifo kungaqala khona.
Ngingathola ukuthi umuntu unesifo sikashukela ngezimpawu?
Izinhlobo ezimbili zikashukela zikhula ngendlela ehlukile. Uma uhlobo lokuqala lwentuthuko luvame ukuba nobudlova, futhi nezimpawu ezibuhlungu, ezinjengokoma okwandayo nokuchama ngokushesha kuvela ngokungazelelwe, bese uthayipha isifo sikashukela sesi-2 sikhula ngesivinini esikhululekile. Esigabeni sokuqala, isifo sohlobo lwesibili kungenzeka singabonakali, futhi akunakwenzeka ukuqonda ukuthi umuntu uyagula. Noma, lesi sifo singase sihambisane nezimpawu ezithile ezicacisiwe:
umuzwa ongapheli wendlala.
Kodwa-ke, isiguli kwesinye isikhathi asiqondi ukuthi kwenzekani kuye. Futhi zivame ukuthi lezi zimpawu kwezinye izifo, i-neurosis, ukuguga ngaphambi kwesikhathi, njll.
Njengoba uhlobo lwesibili lwesifo lukhula, izimpawu zokulimala kwe-vascular, izinso nezinzwa ziyanda. Lokhu kungavezwa ngokubonakala kwezimpawu ezinjengokuthi:
ukubonakala kwezilonda esikhunjeni,
ukusabalala kwezifo zokukhunta kwesikhumba nezinsini,
imizwa yokushintsha kwemizwa,
ukulunywa kanzima kwesikhumba, ikakhulukazi endaweni yangasese
Ubuhlungu emilenzeni, ikakhulukazi ngesikhathi sokuzivocavoca komzimba nokuhamba.
Kwabesilisa, kuvame ukwehla kwe-libido, izinkinga nge-potency. Abesifazane bahlushwa i-thrush.
Kungemva kwalokhu kuphela lapho kuvela khona izimpawu ezijwayelekile zesifo sikashukela - ukoma okhuphukile kanye nokuchama okwandayo.
Ngakho-ke, kaningi isiguli sisebunzimeni. Ngabe isifo sikashukela sinezimpawu ezinjengokucasuka noma ikhanda elibuhlungu? Akunakwenzeka ukusho ukuthi unganquma kanjani ushukela ngezibonakaliso zangaphandle ekuqaleni kwesigaba. Akukatholakali njalo ukuthola uhlobo lwesifo. Njengoba izehlakalo ezinjengokuthi, ngokwesibonelo, ukulunywa, isiyezi nokukhathala kungenzeka ngezifo ezahlukahlukene, ngaphandle kokunyuka kweshukela.
Kepha kunezici ezithile ezifaka isandla ekuthuthukisweni kwesifo sikashukela. Ukuba khona kwabo kufanele kwenze umuntu aqaphele futhi athathe izinyathelo zokuxilongwa okunembile. Lezi zinto zibandakanya:
ukhuluphele (ukubala ukuthi isisindo sakho sikhuluphele noma alwedluli imingcele evamile, ungasebenzisa ifomula ekhethekile netafula elibheka ukuphakama nobulili bomuntu),
ukuba khona kwezihlobo ezisondelene ezihlaselwe yilesi sifo (isakhi sofuzo sokuthayipha isifo sesi-2 sifakazelwe ngokwesayensi),
ukuba khona kwengcindezi engapheli,
iminyaka engaphezu kwengu-50.
Kwabesifazane, ukutholakala kwesifo sikashukela sokutholwa ngesikhathi sokukhulelwa kuyisici esengeziwe sobungozi.
Kodwa-ke, ukuphela kwendlela yokuthola ngokuthembekile ukuthi inkinga sikashukela noma enye into iwukuhlola igazi ushukela. Ngosizo lwale ndlela kuphela, ukuba khona kwalesi sifo kunqunywa.
Ekhaya, kungenzeka ukuthola isifo sikashukela ngezinga eliphakeme lokuqiniseka. Lokhu kudinga amathuluzi atholakalayo ahlonza ushukela wegazi ophezulu. Le mikhiqizo itholakala ngokuthengisa emakhemisi futhi ingasetshenziswa ekhaya.
Kunezinhlobo eziningi zalezi zinhlelo:
ukuhlolwa okusheshayo kokuhlola ushukela wegazi,
imichilo yokuhlola enquma ukuba khona koshukela emchameni,
amasistimu aphathekayo wokuhlaziya nge-glycated hemoglobin.
Njengamanje, ama-glucometer asetshenziswa kabanzi. Lawa ngamadivayisi akuvumela ukuthi wenze ukuhlolwa kwegazi ngoshukela ekhaya. Umsebenzisi wemitha uzobona imiphumela yokulinganisa kungakapheli umzuzu owodwa, futhi kwesinye isikhathi ngemizuzwana embalwa.
Indlela yokulinganisa ushukela nge-glucometer ilula. Kuyadingeka ukufaka umucu wokuhlola kudivayisi njengoba uyaliwe, bese ubhoboza umunwe ngenaliti ekhethekile. Igazi elinethonsi elincane lingezelwa endaweni ekhethekile emshinini wokuhlola. Futhi ngemuva kwemizuzwana embalwa, umphumela ukhonjiswa ebhodini lokufaka elekhompyutha. Imiphumela ingagcinwa kwimemori yedivayisi.
Ungahlola ushukela ngoshukela ngaleyo ndlela izikhathi eziningana ngosuku. Okubaluleke kakhulu ukukala ushukela wakho wegazi ekuseni esiswini esingenalutho. Kodwa-ke, ungalinganisa izinga ngokushesha ngemuva kokudla, kanye namahora ambalwa ngemuva kokudla. Kusetshenziswa novivinyo lokuxineka - ukulinganisa ushukela amahora ama-2 ngemuva kokuphuza ingilazi ene-75 g ye-glucose. Lesi silinganiso siyakwazi ukubona izisu.
Ukuhlolwa okusheshayo kwenziwa ngokwenqubo efanayo, noma kunjalo, amadivaysi kagesi awasetshenziswa, futhi umphumela unqunywa ngokushintsha kombala umucu wokuhlola.
Amanye amadivaysi asetshenziselwa ukutholakala kwesifo sikashukela ngamadivayisi wokuhlola i-glycated hemoglobin A1c. Izinga le-glycated hemoglobin libonisa isilinganiso esimaphakathi seglucose egazini ezinyangeni ezi-3 ezedlule. Lawa madivayisi abiza kakhulu kunamamitha egazi kashukela ajwayelekile. Ukuhlaziywa akudingi ithonsi elilodwa legazi, kodwa amaconsi amaningana aqoqwe ku-pipette.
I-Perekrest S.V., Shainidze K.Z., Korneva E.A. Uhlelo lwama-neurons aqukethe i-orexin. Ukwakheka nemisebenzi, i-ELBI-SPb - M., 2012. - 80 k.
Strelnikova, Natalia Ungashaya kanjani isifo sikashukela. Ukudla namakhambi wemvelo / Natya Strelnikova. - M. Vedas, ABC-Atticus, 2011 .-- 160 k.
Svechnikova N.V., Saenko-Lyubarskaya V.F., Malinovskaya L.A. Ukwelashwa kokunqamuka kokuya esikhathini, i-State Medical Publishing House ye-Russian SSR - M., 2016. - 88 k.
Ake ngazise. Igama lami ngingu-Elena. Sekuphele iminyaka eyi-10 ngisebenza njenge-endocrinologist. Ngikholelwa ukuthi njengamanje nginguchwepheshe emkhakheni wami futhi ngifuna ukusiza bonke abavakashi esizeni ukuxazulula imisebenzi eyinkimbinkimbi hhayi imisebenzi enjalo. Zonke izinto zesiza ziyaqoqwa futhi zicutshungulwe ngokucophelela ukuze kudluliswe ngangokunokwenzeka lonke ulwazi oludingekayo. Ngaphambi kokusebenzisa okuchazwe kuwebhusayithi, ukubonisana nochwepheshe okuphoqelekile kuyadingeka ngaso sonke isikhathi.
Imitha ye-glucose ye-Diacont: ukubuyekezwa, imiyalo yokuqapha ushukela wegazi
Ukudla okuyi-25 nge-cholesterol enhle ukufaka phakathi ekudleni kwakho
Ingabe ushukela ungasetshenziswa ngesikhathi se-pancreatitis, futhi yikuphi ukufaka esikhundleni okuvunyelwe?
I-Lemon yesifo sikashukela: imikhuba yokudla nezindlela zokupheka ezidumile
Ungakuvimbela kanjani i-lipodystrophy
Ukulindelwa kokuphila komdlavuza we-pancreatic